Musuqmaasuq Hareeyay Madaxweynaha iyo Saaxiibadiisa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Musuqmaasuq Hareeyay Madaxweynaha iyo Saaxiibadiisa
Musuqmaasuq Hareeyay Madaxweynaha iyo Saaxiibadiisa
Waa sir culus oo kusaabsan waxqabad la’aanta madaxda dowlada iyo musuqmaasuqa kajiro waddanka oo si hoose looga helayo qaar kamid ah shaqaalaha ka howlgalo madaxtooyada Soomaaliya.
Warbixintaan ayaa waxay tilmaameysaa in hab dhaqanka madaxda Dowlada Federalka Saamaaliya ay iskubadashay sidii NGOs-yada tuugada oo kale iyadoo laxusayo in ay hada u shaqeynayaan hay’ado aad utiro badan oo qabta shaqooyin kala duwan kuwaasoo lunsada hantida qaranka.
Warbxintaaan oo uu helay wariyaha Xaqiiqa Media Center ee magaalada Muqdisho ayaa waxay iftiimineysaa musuqmaasuqa ay ku kacayaan madaxda ugu sareysa Xukuumada Xassan Sheekh, Madaxdaan oo lasheegayo in ay lahaan jireen hey’ado maxali ah kuwaa oo ay dhaqaale uga heli jireen waddamad Carabta iyo wadamada bixiya gargaarka qaarkood.
Sikastaba ha ahaate, masuuliyiinta waddanka ayaa waxay leeyihiin hey’ado kala duwan oo ay ku jiraan Muslim Aid Afriqi , oo ahaan jirtay hay’ad uu madax ka ahaa Faraax Cabdiqaadir, halka madaxweyne Xassan iyo Wasiir Cabdikariim ay ka tirsanaayeen hey’adaas oo ka shaqeyn jirtay arimaha iskuulada iyo jaamacadaha isla markaana aheyd hay’ad gacanta ku heysay xarunta waxbarashada ee Simad. Hay’ada Muslim Aid Afriqi ayaa waxaa ay gaartay in ayka farcamaan hay’ado aad u tiro badan oo ay kala maamulaan saddexdaan masuul.
Madaxa Dalka ugu sareeyo ayaa wuxuu u leeyahay hay’ad lagu magacaabo Al-kheyraad, oo kaddib isku baddashay shirkad wax dhista oo qaadata dhammaan qandaraasyada Dowladda Soomaaliya iyo qandaraasyada ay bixiyaan hay’adaha caalamiga ah, halka si qarsoodi ah ay madax uga tahay haweeney ladhalatay Madaxweyne Xassan sheekh maxamuud oo lagu magacaabo Nuurto shekh maxamuud. waxaaana hay’adaan la isugu keenay ganacsato si loogu helo dhaqaalo aad ufara badan iyada oo isla markiiba lagu guuleystay in lagu helo lacag gaareysa $30m oo bankiga caalamka uu ugu deeqay dib ushiska xarumaha waxbarasho,
Sidookale waxaa ay qaataan dhaqaalaha lagu bixiyo shirarka ay dowladu qabato, sida shirkii City Palace ee waxbarashada, kii nabadeynta Jubooyinka iyo shirkii cadaaladda looga hadlayay iyo dhammaan howlaha dowladdu abaabusho ama hay’adaha caalamiga ah ay qabanayaan, waxayna afduubtaan hirgalinta howlahaas iyada oo ujeedaduna tahay in lagu lunsado dhaqaalaha waddanka.Tusaale ahaaan, shirkii nabadeynta Jubbooyinka oo socday saddex beri waxaa lagu sheegay in ay kubaxday lacag gaareysa $3malyan oo doolarka mareykanka ah, halka kii waxbarashadana lagu sheegay sidookale in ay kubaxday $900,0000dolar , kaasoo isna socday ugu yaraan 3 maalin.
Sidoo kale, waxaa jira shirkad kale oo mardhaw lagu wareejiyay sameynta baasaboorada taas oo ay leeyihiin madaxda ku caan baxday musuqmaasuqa, isla mar ahaantaana shirkaddaan waxaa lasiiyay qandaraaska garoonka diyaaraadaha ee caalamiga ah iyo dekadda Muqdisho , waxaana hoos imaada ama ay shaqa siisaa kaliya shirkadaha ay leeyihiin dadka saaxiibka la ah Madaxweyne Xassan Sheekh.
Waxaa jiro shirkad kale oo lagu dhaco dhaqaalaha waddanka taa oo lagu magacaabo Amco, waxaana iska leh Faarax Cabdiqaadir, waxaana lawadaago kooxdiisa, Shirkaddan waxaa madax ka ahaan jirtay haweeneyda Wasiirka Howlaha Guud hadda lagadhigay, hasa yeeshe hadda waxaa madax ka ah rag aan ku cusbeyn dhaca hantida guud, isla markaana shirkaddaan ayaa u taaagan qaadashada dhammaan qandaraasyada dhismaha ee maxaliga ah oo ay hay’adaha caalamku ay bixiyaan.
Tusaale ahaan, dhaqaalaha ay Dowladda Ciraaq ku bixisay dib u dhiska xarumaha dowladda taa oo aheyd lacag gaareysa $15 m marka laga reebo dhismihii Xarunta Howlaha Guud waxaa qarashkii kale loo leexiyay meelo kale sida xarun cusub oo lasheegay in loo dhisay Jaamacada Simad. Iyada oo islamarkaana shirkaddan ay qaadato dhammaan dhaqaalaha beesha caalamku ay ugu tala gashay dib u dajinta barakacayaasha oo la qorsheynayo in laga hirgaliyo Magaalada Baydhabo waxaana lagu qiyaasay in ay ku kacayso aduun gaaraya $70m oo loogu tala galay in dadkaas lagu caawiyo ilaa 6 bilood.
Waxaaana hoos imaada shirkaddaan shirkaddo yar yar sida shirkada Safari oo kashaqeysa hotelada, dhismaha iyo arimaha bankiyada, iyada oo uu madax ka yahay Cabdikariim iyo wiilal ay qaraabo yihiin oo howl wadeenu ka ah.
Dhinaca nabad sugida iyana waxaa u xilsaaran Cabdikariim, tusaale ahaan lacagaha aduunku ugu deeqo in nabadgelyada wax looga qabto waxay gashaa jeebka madaxweyne Xassan, wasiirada qaar iyo taliyayaasha ciidamada taasina waa sababta ammaanka wax looga qaban la’ayahay maadama lacagaha deeq bixiyayaashu bixiyaan sida lacagta bilaha ah ee ciidamada oo dhan $300m ay gasho jeebabka mas’uuliyiintaas. Sidoo kale waxaa la sheegay in xubno ka tirsan ciidamada qudhooda ay musuqa dhinac ka yihiin sida Bashiir Goobe.
Dowlada Turkiga oo bixisa 4.5m oo ay ugu tala gashay in ammaanka wax looga qabto milyan kamid ah waxaa qaata Madaxweyne Sheekh Hassan,Sidookale dowlada Australia Talyaaniga, Norwey, Sweden iyo kuwa kale ayaa iyana waxay bixiyaan lacago gaar ah oo loogu talagalay wax kaqabashada amniga gaar ahaan nolasha ciidanka soomaaliyeed balsa waxaa ay lacagtaasi dhan wada gashaa jeebabka madaxda dowlada.
Sidookale dowlada Imaaratka, Sacuudiga iyo Kuweyt waxay mudadii halka sana gudihiisa aheyd bixiyeen ilaa $31m oo loogu talagalay waxkaqabashada xaalada ammaan xumo balsa lama garanayo halka ay lacagta intaa la’eg kudhuntay waxaa warkeeda ugu danbeysay boorsooyinkii ay kujirtay markii ay taalay aqalka madaxtooyada villa Somalia.
Sikastaba ha ahaate, markaad qiimeyso xaalada dhabta ah ee dadka iyo dalka Soomaaliya kusugantahay xilligan lajoogo iyo awooda iyo dhaqaalaha gacanta ugu jirto dadka hada majaraha uhayo siyaasada Soomaaliya oo ah madaxda qaranka ee manta iyo waxqabad la’aantooda iyo lunsashada hantida qaranka ayaa waxaa ladhihi karaa waa arin xanuunkeeda leh Maadaama amaanka ummada lacagihii loogu talagalay ay galayso jeebabka madaxda dowlada iyada oo loo isticmaalayo arimo khaas ah.
Halka waxyeelada kadhalata falalka amni daro ay aad usaameyneyso shacabka iyo dadka dowlada ushaqeeyo ee masaakiinta ah iyo iyada oo marwalbana ay tahay xaalada amaanka mid faraha kasii baxeyso kuna abuureyso walaac iyo argagax shacabka gudaha kunool iyo kuwa kuhaminayo in ay wadankooda dib ugu soolaabtan maadama ay aamineen in wadankooda yahay meesha kaliya ee manta ubaahan.
Kala soco Warbixino aad u xasaasi ah oo taabanaysa xaqiiqda dhabta ah ee arimaha siyaasada iyo bulshada. Xaqiiqa.com
Previous articleDEG DEG: Qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay nawaaxiga KM-0
Next articleWasaarada Arimaha Gudaha oo shaacisay in lala wareegayo gurigii laga helo walxa qarxa